#Kenya oo ka Walwalsan kulan "qarsoodi ah" oo Dhexmarey madaxweynayaasha Tanzania iyo Soomaliya - Get Latest News From Horn of Africa
#Kenya oo ka Walwalsan kulan “qarsoodi ah” oo Dhexmarey madaxweynayaasha Tanzania iyo Soomaliya
Wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa qoray in madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu “si qarsoodi ah” u la kulmay dhigiisa Tanzania, John Magufuli.
Jaraa’idka ma uusan soo bandhigin goobta iyo goorta uu qabsoomay shir-madaxeedkan si lamid ah ajendaha lagu gorfeeyay.
Balse isagoo soo xiganaya mas’uul sarre, joornaalka ayaa shaaciyey in dowladda Kenya ay ka walaacsan tahay isku-imaatinkaasi.
Fahfaahintan ayaa soo if-baxeysa iyadda oo bishii hore uu Farmaajo kuhakadey [transit] dalka Tanzania, isaga oo kusii jeeda Koonfur Afrika.
Hogaamiyaha dalka leh xeebta ugu dheer aduunka ayaa South Afrika uga qeybgalay caleemo saarka madaxweynaha cusub ee dalkaasi, Cyril Ramaphosa.
Mr Farmaajo ayaa intii uu ku sugnaa Koonfur Afrika wuxuu sidoo kale ka kulmay Jaaliyadda Soomaaliya oo uu ku tartarsiiyey in aysan “ka walwalin in waddankooda ay qaadaneyso dowlad kale”.
Saxaafadda maxaliga ayaa warineysa in qaar kamid ah xeel-dheereyaasha ay farta ku fiiqeen in dalka deriska la leh Kenya sida Itoobiya, Tanzania iyo Eritrea ay door weyn ka cayaarayaan xiisada sii kululaaneysa.
Madaxtooyadda Soomaaliya illaa iyo haatan kama aysan jawaabin warkaan ay qoreyso war-fidiyeenadda Kenya.
Balse waxay kusoo aadeysaa iyadoo oo Axadii ay dowladda Kenya shaacisay in ay dacwad ka gudbineyso Ingiriiska iyo Norway oo ay ku eedeysay in ay hurinayaan xiisada diblumaasiyadeed ee kala dhaxeysa Soomaaliya.
Is-qabqabsiga ayaa ku saabsan muran xuduud badeed ah, kaasi oo Maxkamadda Cadaaladda Aduunka ay go’aan kasoo saareyso dhamaadka sanadkan ama bilowga sanadka soo socda ee 2019.
Kenya iyo Tanzania ayaa waxaa ka dhaxeeya muran dhowr wejiyo ah – midka dhanka xuduuda ah badda oo xasishay iyo ganacsiga oo wada hadalo uu uga socdo sidii loo dhameyn lahaa.